Perhekuntiensa - Fins - Burmees Vertaling en Voorbeelden
Je was op zoek naar: perhekuntiensa (Fins - Burmees)
Ja he heittivät arpaa joka ovesta, nuoremmat niinkuin vanhemmatkin, perhekuntiensa mukaan.
မုရှိသားကားမဟာလိ၊ ဧဒါ၊ ယေရိမုတ်တည်း။ ဤရွေ့ကား မိမိတို့ အဆွေအမျိုးအလိုက် လေဝိအမျိုး သားတည်း။
sekä heidän veljensä, heidän perhekuntiensa päämiehet, tuhat seitsemänsataa kuusikymmentä miestä, kelvollisia toimittamaan palvelusta Jumalan temppelissä.
အဆွေအမျိုးသူကြီး အမျိုးသားချင်း တထောင် ခုနစ်ရာခြောက်ဆယ်ရှိကြ၏။ ဤသူတို့သည် ဘုရား သခင်၏ အိမ်တော်အမှုကိုဆောင်ရွက်ခြင်းငှါ တတ်စွမ်း နိုင်သောသူပေတည်း။
သူတို့၌ သားမယားများသောကြောင့်၊ အဆွေ အမျိုး အသီးအသီးအလိုက်၊ စစ်သူရဲတပ်သား သုံးသောင်း ခြောက်ထောင် ရှိကြ၏။
"Israelilaiset leiriytykööt kukin lippunsa luo, perhekuntiensa sotamerkkien kohdalle; he leiriytykööt taammas ilmestysmajan ympärille.
ဣသရေလအမျိုးသားအသီးအသီးတို့သည် မိမိ တပ်နှင့်ဆိုင်သောအလံ မိမိအဆွေအမျိုးနှင့်ဆိုင်သော အလံ အနားမှာ ပရိသတ်စည်းဝေးရာ တဲတော်ကို ရှေ့ရှု ပြု၍ နေရာချရမည်။
စစ်သူရဲအဆွေအမျိုး အလိုက်ယူသော စာရင်း ဟူမူကား၊ ယုဒအမျိုး ဗိုလ်ချုပ်မင်းအာဒနနှင့် ခွန်အား ကြီးသော စစ်သူရဲသုံးသိန်း၊
အဆွေအမျိုးသူကြီးများဟူမူကား၊ ခွန်အား ကြီး၍ ကျော်စောသော စစ်သူရဲဧဖာ၊ ဣရှိ၊ ဧလျေလ၊ အာဇရေလ၊ ယေရမိ၊ ဟောဒဝိ၊ ယာဒျေလတည်း။
တောလသားကား တောလအဆွေအမျိုးသူကြီး ဩဇိ၊ ရေဖာယ၊ ယေရေလ၊ ယာမဲ၊ ယိဗသံ၊ ရှမွေလတည်း။ ထိုအဆွေအမျိုးအစဉ်အဆက်တို့သည် ခွန်အားကြီးသော သူရဲဖြစ်၍၊ ဒါဝိဒ်မင်းလက်ထက်နှစ်သောင်း နှစ်ထောင် ခြောက်ရာရှိသတည်း။
arcemque (Latijn>Frans)conditor (Latijn>Spaans)nätverkets (Zweeds>Engels)tetraciklini (Sloveens>Maltees)ang lalaki ay nagkakatay ng karne (Tagalog>Engels)histoires (Frans>Fins)biscia (Italiaans>Engels)grabber (Engels>Russisch)swael (Afrikaans>Engels)nkarabe pele (Tswana>Engels)aap ka chaye nasta hua (Hindi>Engels)motorhakfrees (Nederlands>Frans)ano ang kahulugan ng itinatanoy (Tagalog>Engels)tarjama de español (Spaans>Arabisch)how u block me (Engels>Portugees)yo me levanto (Quechua>Spaans)zachování (Tjechisch>Hebreeuws)zoriontzeko (Baskisch>Frans)per favore avvisami quando hai spedito (Italiaans>Engels)je t'envoie de doux baisers (Frans>Italiaans)meaning of amanah (Maleis>Engels)verschrikkelijke (Nederlands>Portugees)i hope that your impression wont be different (Engels>Russisch)simplicity is the key of brilliance (Engels>Hindi)top up (Engels>Hongaars)